10 Cách Khắc Phục Mạng Yếu, Wifi Chậm Bất Thường | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: 10 Cách Khắc Phục Mạng Yếu, Wifi Chậm Bất Thường | Muasalebang in Muasalebang
1 Isignali ye-Wifi inamandla, kodwa uxhumo lwenethiwekhi alunamandla noma alukwazi ukufinyelela inethiwekhi – siyini isizathu?
2 Izindlela eziyi-10 zokulungisa inethiwekhi ebuthakathaka, i-wifi ehamba kancane
2.1 1. Hlola isignali
2.2 2. Ukusebenzisa idivayisi ye-Wifi Repeater
2.3 3. Ukulawula Umkhawulokudonsa Wenethiwekhi
2.4 4. Qala kabusha i-Router
2.5 5. Misa i-IP emile
2.6 Izinyathelo zimi kanje:
2.7 6. Misa kabusha irutha yesidluliseli se-Wifi ukuze ulungise iphutha lamagagasi e-wifi aqinile kodwa uxhumano lwenethiwekhi olubuthaka
2.8 7. Qondisa kabusha uthi lokusakaza lomzila
2.9 8. Hlola ukuthi ukhona yini osebenzisa “ithempeli” le-wifi
2.10 9. Iphutha le-Wifi Ukufinyelela Okukhawulelwe
2.11 10. Faka esikhundleni ikhebula lenethiwekhi
3 Ncoma amadivayisi wangempela enethiwekhi athengiswa e-Nguyen Kim
4 Imibuzo evame ukubuzwa mayelana nesimo senethiwekhi ye-wifi ebuthaka
4.1 Isignali ye-wifi inamandla kodwa uxhumo lwenethiwekhi alunamandla, siyini isizathu?
4.2 Isetshenziswa nini i-Wifi Repeater?
Isignali ye-Wifi inamandla, kodwa uxhumo lwenethiwekhi alunamandla noma alukwazi ukufinyelela inethiwekhi – siyini isizathu?
Ngokuvamile, isivinini senethiwekhi sizoncika kakhulu kuphakheji okhetha ukulisebenzisa. Nokho, kusenezimo lapho isivinini se-Wifi sincipha ngemva kwesikhathi eside sokusetshenziswa ngenxa yezizathu ezinjengamarutha awonakele, ibhalansi yomthwalo empofu noma endlini enamadivayisi amaningi amunca amagagasi kagesi, ..futhi ngezinye izikhathi ikholomu yesambulela isignali ye-wifi eqinile kodwa uxhumano lwe-inthanethi olubuthakathaka noma okubi nakakhulu, alukho uxhumano lwenethiwekhi olungasetshenziswa. Lokhu kuvame ukubangelwa amaphutha ambalwa alandelayo:
Iphutha lolwazi kuyunithi yemodemu ye-wifi ngokuxhunywa kwezinto zikagesi ezifana nama-smartphone noma ama-laptops, ithebhulethi… Leli phutha lidinga ukuthi umsebenzisi aqale kabusha ikhompyutha/i-smartphone, imodemu ye-wifi kanye nokushintsha izilungiselelo ocingweni ngesikhathi esifanayo.
Iphutha lolayini wokudlulisela ongazinzile futhi yimbangela evamile yalesi simo Isignali ye-wifi eqinile kodwa uxhumano lwe-inthanethi olubuthakathaka. Leli phutha livamise ukwenzeka ngoba ifoni ihlala ixhumekile ku-Wifi hotspot isikhathi eside ngaphandle kokuqalisa kabusha.
Hlola isimo semodemu ukuze ubone ukuthi kukhona yini ukwehluleka, intambo ye-fiber optic ephukile noma cha. Uma lokhu kwenzeka, sicela uxhumane nomhlinzeki wemodemu ye-Wifi ukuze uthole isevisi yesiqinisekiso yekhwalithi nethembekile, efana ne-Nguyen Kim ukuze angabe esaba namaphutha. isignali ye-wifi eqinile kodwa uxhumano lwe-inthanethi olubuthakathaka futhi.
Hlola okwengeziwe Ungasikhulula kanjani isivinini se-Wifi lapha!
Isignali ye-wifi eqinile kodwa uxhumano lwe-inthanethi olubuthakathaka isuka kuzizathu eziningi ezinkingeni zemodemu noma ukuxhuma okungazinzile
Izindlela eziyi-10 zokulungisa inethiwekhi ebuthakathaka, i-wifi ehamba kancane
Ngemva kokulungisa isimo isignali ye-wifi eqinile kodwa uxhumano lwe-inthanethi olubuthakathaka kodwa usenoxhumano lwe-inthanethi olunensa kakhulu, zama lungisa i-wifi ebuthakathaka ngezindlela ezilandelayo.
1. Hlola isignali
Xem Thêm Bộ Phát Wifi Di Động 4G LTE 150Mbp Huawei B311-221 Trắng | Muasalebang
Uma ulanda amadokhumenti, noma ubuka amamuvi kancane kakhulu,..bese sazi kalula ukuthi isignali ebuthakathaka. ABESIFAZANEKodwa ngesinye isikhathi kusekhona abantu abaningi abangakwazi ukukala ngoba indawo iphelelwe yi-wifi. UMNIKELOKulokhu, cabanga ngohlelo lokusebenza lwe-Wifi Analyzer (inkundla ye-Android) noma i-XYZ (inkundla ye-iOS) ukuze uhlole amandla nobuthaka be-wifi endaweni eseduze nawe.
Uma lesi simo senzeka kudivayisi yekhompuyutha: zama lokhu kulungisa okusheshayo okulandelayo ukuze ikhompuyutha ingaxhumi ku-wifi!
Hlola isignali ye-wifi ngezinhlelo zokusebenza ezitholakala ku-Android noma i-iOS ukuze ulungise isimo esilokozayo maduze
2. Ukusebenzisa idivayisi ye-Wifi Repeater
Njengamanje, abasebenzisi banezinketho eziningi abangakhetha kuzo inethiwekhi i-wifi ibuthakathaka kunangaphambili, futhi isebenzisa i-repeater wifi range extender enezinzuzo eziningi zedizayini ehlangene engabangeli ukulahlekelwa ubuhle kanye nesici sokusabalalisa amaza e-wifi ngamandla amakhulu nobubanzi ukusuka kumzila oyinhloko. Le divayisi iwusizo kakhulu ezakhiweni eziphakeme kakhulu futhi inemishini eminingi exhunywe kunethiwekhi okudingeka isetshenziswe ngesikhathi esisodwa.
Ngaphezu kwalokho, ungase futhi ucabangele ukusebenzisa I-wifi ye-USB ukusiza izinto zikagesi zamukele futhi zisakaze i-wifi ngokuzinzile, ukukhawulela ukulahleka kwenethiwekhi, ukucwayiza noma ukunensa.
3. Ukulawula Umkhawulokudonsa Wenethiwekhi
Ngaphandle kwephutha isignali ye-wifi eqinile kodwa uxhumano lwe-inthanethi olubuthakathaka, iqiniso lokuthi ulanda futhi wenze imisebenzi eminingi esindayo futhi lingenza uxhumo lwe-wifi lube buthaka. Ungahlola ukuthi ingabe ikhompuyutha yakho ilanda izinto eziningi kakhulu, mhlawumbe iziqephu zakho eziyintandokazi noma imidlalo esindayo nge-IDM, isibonelo. Uma ikhaya lakho ligcwele, bheka ukuthi ukhona yini odonsa umkhawulokudonsa wakho.
4. Qala kabusha i-Router
Irutha iyisisetshenziswa senethiwekhi ngoba sisebenza kakhulu endlini, ngakho kwesinye isikhathi igcwala kakhulu futhi ibangele amaphutha enza ulayini ube nomsindo futhi ungahlaliseki, ungakwazi ukuqala kabusha Umzila ukuze uyilungise. lungisa i-wifi ebuthakathaka. Cishe leli ikhambi lomlilo elivusa umcabango kakhulu, ungazama ukuqala kabusha noma ukuvala ngokuphelele umzila cishe imizuzu emi-5 kuya kweyi-10, ukhiphe ibhethri nentambo yamandla (uma kusebenza) bese uyivula ukuze usethe kabusha yonke ukusatshalaliswa kwe-wifi. uhlelo.
Uma i-Router yakho inezinkinga, Sicela uthuthukise isamukeli sakho se-wifi yasekhaya nge Idivayisi yenethiwekhi ye-TP-Link. Noma hlola okwengeziwe Imibandela yokukhetha ukuthenga irutha ehambisana nezidingo zakho Ngiyacela!
Sicela unake ukunqamula intambo yamandla bese ulinda cishe imizuzwana engu-60 ngaphambi kokuqalisa kabusha umzila ukuze ulungise i-wifi ebuthaka.
5. Misa i-IP emile
Kwesinye isikhathi iphutha lokungakwazi ukufinyelela inethiwekhi ngenxa yesignali ye-wifi enamandla, kodwa ukuxhumeka kwenethiwekhi okubuthakathaka kungase kuvele ekubeni namakhompyutha amaningi asetshenziswa ohlelweni olufanayo lokufinyelela. Indlela elula ukuthi ungasetha i-IP engashintshi futhi uhlole i-IP ye-laptop yakho, i-smartphone noma enye idivayisi kagesi ukuze ufinyelele inethiwekhi futhi lungisa i-wifi ebuthakathaka
Izinyathelo zimi kanje:
Isinyathelo 1: Chofoza kwesokudla isithonjana senethiwekhi ku-Taskbar bese ukhetha Vula Inethiwekhi Nesikhungo Sokwabelana
Isinyathelo sesi-2: Chofoza kunethiwekhi ye-wifi ofinyelela kuyo lapho kuvela iwindi le-Open Network and Sharing Center bese ushintsha ikheli le-IP.
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, chofoza Properties ukuze ukwazi ukwenza ngezifiso amanye amapharamitha amaningi ahlobene nenethiwekhi ye-wifi
Isinyathelo sesi-4: Sesha okufakiwe kwe-Internet Protocol Version 4 kusixhumi esibonakalayo se-Wifi Properties bese uchofoza kabili lapho
Isinyathelo sesi-5: Esigabeni esithi Guqula IP etholakala kuqala, khetha okuthi Sebenzisa Amakheli E-IP Alandelayo bese ukhetha ukushintsha imingcele emigqeni engezansi. Qaphela kulayini we-IP 192.168.1.96, ungakwazi ukushintsha ngokuguquguqukayo usuke koku-1 uye ku-250 futhi ungasetha inombolo enkulu ukuze ugweme ukuphindaphinda kwe-IP, engxenyeni ethi Sebenzisa lesi sigaba sekheli leseva ye-DNS elandelayo usetha i-oda libe ngu-8.8 .8.8 kanye nokuthi 8.8.4.4 kulungile .
6. Misa kabusha irutha yesidluliseli se-Wifi ukuze ulungise iphutha lamagagasi e-wifi aqinile kodwa uxhumano lwenethiwekhi olubuthaka
Indawo yomzila iphinde ithinte isignali ye-wifi yasekhaya
Indawo ye-router ibaluleke ngempela ekudlulisweni kwe-wifi yonke indawo endlini kanye nesivinini senethiwekhi yokuxhuma. Uma i-wifi transmitter yakho itholakala ezindaweni ezifihliwe noma izithiyo eziningi ezinjengamakhona ezindlu, amakhona ezindonga, .. izophazamisa ikhwalithi yenethiwekhi yakho yasekhaya, ezokwehla, okuholela esimeni senethiwekhi yezikhawu, uxhumano olunensayo, .Umzila kufanele zibekwe ezindaweni ezivulekile neziphakeme, zingavinjwa ukuze amagagasi adluliselwe kahle kudivayisi yakho.
7. Qondisa kabusha uthi lokusakaza lomzila
Uma umamukeli nesidlulisi kusetshenziswa endizeni eyodwa eqondile, ukudluliselwa phakathi komzila kanye nedivayisi esebenzayo kuzokhuliswa. Kungcono ukubeka izimpondo ezimbili ziqondane (eyodwa evundlile, eyodwa iqonde) ukuze wenze ukwamukela kusebenze kahle kakhulu.
8. Hlola ukuthi ukhona yini osebenzisa “ithempeli” le-wifi
Kufanele uhlole kabili ukuze ubone ukuthi ukhona yini osebenzisa i-wifi yakho yasekhaya
Uma kunabantu abaningi abasebenzisa i-wifi ngesikhathi esifanayo, kuzokwenza inethiwekhi ilokoze futhi uxhumo lube buthaka. Ubuwazi ukuthi isimo samanje ukweba i-wifi aziwa kakhulu ngoba iningi labasebenzisi namuhla libeka amagama ayimfihlo okulula ukuwaqagela, futhi angenamandla ngokwanele, asebenziseka kalula ngabaduni. ithuluzi lokuqhekeza iphasiwedi. Ungahlola ngezinye izinhlelo zokusebenza ukuze uhlole ukuthi ingabe ukhona yini osebenzisa i-wifi ekhohlisayo, noma uhlole inombolo yezibani zesignali kumzila ngoba ngokuvamile uma kunoxhumo olwengeziwe, kuzoba khona ukukhanya kwesiginali eyengeziwe.
Uma uthola ukuxhumana okungavamile, kufanele ukuqinise ukuphepha kwe-wifi ikhaya lakho ukuze ugweme isimo esinjalo. Kuhlole manje Ungahlola kanjani ukuthi kukhona umuntu osebenzisa i-wifi yakho yasekhaya? Ngiyacela!
Xem Thêm Cách đăng ký mạng Viettel 5k 1 ngày đơn giản, nhanh chóng | Muasalebang
Isignali ye-wifi eqinile kodwa uxhumano lwe-inthanethi olubuthakathaka kanye nokucwayiza okubangela ukungakhululeki nokuphazamiseka kubasebenzisi
9. Iphutha le-Wifi Ukufinyelela Okukhawulelwe
Uma ikhompuyutha yakho ixhumeke ku-wifi futhi ikhombisa ikholomu isignali ye-wifi eqinile kodwa uxhumano lwe-inthanethi olubuthakathaka noma awukwazi ukufinyelela inethiwekhi, umzila kungenzeka ukuthi ubike iphutha lokufinyelela okulinganiselwe. Ungacela ukukhishwa kabusha kwe-IP ngokulandela lezi zinyathelo ezingezansi:
Isinyathelo 1: Sebenzisa inhlanganisela yeWindows + R, bese ufaka i-CMD bese ukhetha okuthi Kulungile ukuze ufinyelele ku-Command Prompt
Isinyathelo sesi-2: Ngemuva kwethebhu ye-Command Prompt thayipha imiyalo ye-2: ipconfig/release kanye ne-ipconfig/renew
Lungisa i-Wifi ebuthaka ngokubheka ukuthi umzila unephutha lokufinyelela okulinganiselwe noma cha
Buka Okuningi Iziqondiso zendlela yokubala isivinini senethiwekhi Yisebenzise lapho kudingeka!
10. Faka esikhundleni ikhebula lenethiwekhi
Ikhebula lenethiwekhi liyi-conductor esontekile eyenziwe ngensimbi noma i-alloy (izintambo zethusi ne-fiber optic), ngaphandle i-sheath evikelayo. Lena i-hardware yenethiwekhi exhuma idivayisi yenethiwekhi kwamanye amadivaysi noma exhuma amakhompyutha amabili noma ngaphezulu ukwabelana ngamaphrinta, izikena, njll.
Ngakho uma ikhebula lenethiwekhi lindala, liphukile noma lilimele, lizokwenza i-wifi ibe buthaka futhi inethiwekhi ihambe kancane. Kunezinhlobo ezahlukene zezintambo zenethiwekhi: CAT 5, CAT 5E, CAT 6/6A.
– I-CAT 5: isivinini sokudlulisa esiphezulu yi-100 Mbps kuphela.
– I-CAT-5E: inesivinini sokudlulisa esiphezulu esiphindwe ka-10 kune-CAT 5 ye-1,000 Mbps futhi iwuhlobo lwekhebula olusetshenziswa kakhulu namuhla.
– I-CAT 6/6A yokudluliswa kwedatha okuzinzile futhi ikude kunezinye izintambo. Ikhebula lifinyelela isivinini sokudlulisa esisheshayo esifika ku-10,000 Mbs.
Uma ungakayilungisi inkinga yenethiwekhi ye-wifi ehamba kancane, kungenzeka ukuthi ikhebula lenethiwekhi oyisebenzisayo libe nenkinga. Sicela ushintshe ikhebula lenethiwekhi ufake ikhebula le-CAT-5E noma le-CAT 6/6A ukuze udlulise kangcono kanye nesivinini senethiwekhi yamasekhondi ezinzile ukuze uthole ukusebenza kahle okuphezulu.
Ncoma amadivayisi wangempela enethiwekhi athengiswa e-Nguyen Kim
I-transceiver engenantambo ye-TP-LINK’s 300Mbps ivumela ukubukwa kwevidiyo kwe-HD nokushaya kwe-inthanethi ngekhwalithi ephezulu kakhulu enemikhiqizo evelele TP-LINK_TL-WN822N i-transceiver yomsakazo, irutha i-TP-LINK ARCHER C20, TP-Link 300Mbps Wifi transmitter TL-WR841N
Uma ufuna umshini kagesi ozokunikeza izidingo zakho zansuku zonke, phuthuma ku-Nguyen Kim. Bona Ngihlala nginemigqa eminingi yomkhiqizo, amamodeli ahlukahlukene kanye nemikhiqizo efana nayo I-Samsung, i-apula, I-Vsmart, UDell, HP, Asus,… kanye nemikhiqizo ye-laptop, umabonakudeama-smartphone, i-smart TVukuqapha ikhompuyutha,… nge Isevisi ehlonishwayo ngemuva kokuthengisa, iwaranti yangempela evela ku-Nguyen Kim!
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana nesimo senethiwekhi ye-wifi ebuthaka
Isignali ye-wifi inamandla kodwa uxhumo lwenethiwekhi alunamandla, siyini isizathu?
Mhlawumbe inkinga ilele ku-bandwidth yenethiwekhi yakho yasekhaya ijubane eliphansi, uma kukhona abasebenzisi abaningi, inethiwekhi izoba buthakathaka nakuba isignali ye-wifi isaqinile.
Isetshenziswa nini i-Wifi Repeater?
I-Repeater Wifi inesici sokusabalalisa amagagasi e-wifi ngamandla amakhulu kanye nobubanzi ukusuka kumzila oyinhloko. Ngakho-ke, le divayisi iwusizo kakhulu ezakhiweni eziphakeme kakhulu futhi inamadivayisi amaningi axhunywe kwinethiwekhi okudingeka asetshenziswe ngesikhathi esifanayo.
U-Nguyen Kim uthemba ukuthi lo mhlahlandlela wokulungisa amagagasi e-wifi aqinile kodwa ufake amanethiwekhi abuthakathaka kuzokusiza uthole ulwazi olwengeziwe lungisa i-wifi ebuthakathaka, ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa ngenkathi usebenzisa inethiwekhi. Ngaphezu kwalokho, ungathinta ngokushesha inombolo yocingo ethi 1800 6800 (yamahhala) noma uvakashele Isikhungo Sokuthenga se-Nguyen Kim esiseduze ukuze uthole izeluleko ezengeziwe ngemikhiqizo namasevisi e-Nguyen Kim. Futhi ungakhohlwa ukulandela iwebhusayithi nguyenkim.com njalo ukuze ungaphuthelwa noma yikuphi ukudayiswa kwe-flash!